Email Anwụọla? | Martech Zone
Mgbe m gụrụ akụkọ na-adịbeghị anya gbasara otu Otu IT na UK machibidoro email, M na-aghaghị na-eche banyere m na-eme kwa ụbọchị na otú ihe email na-apụnara m nke a na-arụpụta ụbọchị. Ajụrụ m ndị na-agụ akwụkwọ anyị ajụjụ ahụ site na Zoomerang nyocha na ole na ole chere na email ga-anwụ n'oge na-adịghị anya.
Nsogbu a, n’uche m, abụghị ozi-e. Mgbe etinyere email nke ọma, ọ na-arụ ọrụ nke ọma. Inwe ederede, nkenke, nkwukọrịta nke na-akọwapụta ebumnuche na usoro na-eme ka ọ dịrị ndị mmadụ mfe ịme ihe na ozi ịntanetị ndị ahụ. Echeghị m na ụlọ ọrụ UK na-enyere onwe ya aka site na igbochi usoro nkwukọrịta isi nke ụwa niile nakweere. Ha nwere ike ịtọ iwu ụfọdụ nke itinye aka na otu ha si achịkwa ozi email ha.
Nsogbu a SPAM na usoro site na anyi ịdenye aha kpaliri. N'ime afọ 20, anyị agbanwebeghị ihe ọ bụla na usoro ndenye aha email. Nnukwu ozi ịntanetị site na ụlọ ọrụ dị mma gaa n'ihu igbochi, mgbe spammers na-aga n'ihu iji nweta email site na. Mmetụta dị na arụpụta ihe (na gburugburu ebe obibi) dị ịtụnanya.
Ruo mgbe ISP (onye na-eweta ọrụ ịntanetị) ga-agbaso usoro ọhụụ, okwu a ga-aga n'ihu. Nkwado m ga-abụ maka Google Apps iji zụlite usoro ndebanye ikike maka ndị ahịa ma jikwaa nwepu aha na sava nke ha. Ndị ọrụ dị ka nke m nwere ike ịdenye ngalaba anyị na ISP ma gbanyụọ nkwukọrịta ọ bụla anaghị anabata. Oge ọ bụla anyị banyere n’otu akwụkwọ akụkọ, opt-in ga-edebanye aha ya na ISP… ọ bụghị ESP (Onye na-enye Ọrụ Email). ISP agaghị achọ ihe ọ bụla ọzọ… ha nwere ike igbochi email niile belụsọ akwụkwọ ndị enyere.
Ozi nkowa mgbakwunye site Nweta Ndidi.
Tags: email nwụrụemail Marketingonye na-enye ọrụ emailemail statsespinfographicbu ozi nwuru anwuispjunk email